Amaphutha we-9 Landing Page Okufanele Uwagweme | Martech Zone
Ungamangala ukuthi zingaki izinto eziphazamisa umuntu ekhasini abafika kulo. Izinkinobho, ukuzulazula, izithombe, amaphuzu ezinhlamvu, amagama agqamile… konke kudonsa ukunakekelwa kwesivakashi. Ngenkathi lokho kuyinzuzo uma wenza ikhasi ulungiselela futhi ubeka ngamabomu lezo zinto isivakashi esizilandelayo, ukungeza into engalungile noma izinto ezingaphandle kungasusa isivakashi ekubizelweni esenzweni ofuna bachofoze kuso bese uguqula uvule.
AbakwaCopyrightblogger bakhiphe le infographic emnandi edala ukufanisa phakathi kwesihambeli esizeni sakho nomuntu olandela izinkomba, Ama-Goofs we-Landing Page akwenza ulahlekelwe yibhizinisi. Ngiwuthanda kakhulu lo mfanekiso ngoba ulunge kakhulu njengoba ucabanga ngohambo oluthathayo.
Into yokuqala esiyenzayo ohambweni kumephu imvelaphi nendawo okuyiwa kuyo, bese sinikeza indlela esebenza kahle kakhulu phakathi. Lapho ukhona ukwenza ibalazwe ekhasini lakho lokufika, ngethemba ukuthi wenza into efanayo - ucabanga ukuthi izivakashi zakho zivelaphi futhi ungashiyi mbuzo wokuthi iyini indawo oya kuyo. Nazi 9 amaphutha ajwayelekile ongayenza lapho udala amakhasi okufika (kepha kufanele ugweme):
Awuzange uchaze i- izinzuzo zokuguqulwa.
Awunikelanga nge- indlela elula yokuguqulwa.
Awuzange ubonise ngokusobala i- ukuphela okukodwa noma umphumela.
Awuzange xhumana ngemininingwane esemqoka ngempumelelo.
Awuzange susa okuqukethwe okungadingekile.
Usebenzise kakhulu ijagoni namagama anzima.
Awuzange ukusekele okuqukethwe kwakho ngedatha, imininingwane kanye nobufakazi boku khulisa ukwethembeka kwakho.
Awuzange susa izinketho ezingaphandle njengokuzulazula nezixhumanisi ezingeziwe.
Awuzange uqiniseke ukuthi ikhasi lakho lokufika ilayishwe ngokushesha!
Tags: amagama anzimaizinzuzo zokuguqulwaikhophiuya khonaijagoniimininingwane esemqokaukuklanywa kwekhasi lokwakhaama-goofs wekhasi lokufikaikhasi lokufika infographicukufika kwamaphutha ekhasiukwenziwa kwekhasi lokungenaindlela eya ekuguqulweniokuqukethwe okusekelaubufakaziokuqukethwe okuningi
Inhlolovo: Ukukhiqiza Kwakho Okuqukethwe Kuqhathaniswa Kanjani?
Isebenza kanjani i-Data Onboarding Marketing Multi-Channel Marketing